Imikhiqizo eqhubekayo: lokho abayikho, ukuthi isetshenziswa kanjani kanye nezibonelo | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | 18/05/2022 12:00 | Imvelo
Imboni yezemfashini iyimboni yesibili engcolisa kakhulu emhlabeni, futhi ziyanda izinkampani nabaqambi ababhejayo ekukhiqizeni okunomthwalo wemfanelo. Akungabazeki ukuthi imboni yezemfashini iye yaba nenguquko ebheke emfashinini esheshayo eminyakeni yamuva futhi ayizange iyeke ukukhula. Konke lokhu kuholele ekudalweni kwe brand esimeme eziqinisekisa ukunakekelwa kwemvelo kanye nokuncipha komthelela kwezemvelo ezinawo.
Kulesi sihloko sizokutshela mayelana nemikhiqizo eyinhloko eqhubekayo ekhona, izici zayo nokuthi zisiza kanjani ukunciphisa umthelela wemvelo.
1 brand esimeme
2 Imikhiqizo engcono kakhulu esimeme
2.1 Isazi sempilo
2.5 I-Playa & Co.
2.6 UMary Mubi
2.9 iziketi zami
Emashumini ambalwa eminyaka adlule, kwakucishe kungenzeki ukuthenga izingubo nokuzigqoka ngokokuqala ngqa nsuku zonke. Intengo kanye nokuntuleka kwamaketanga amakhulu, okufinyeleleka kakhulu futhi kukhangayo emphakathini, kwasiholela ekubeni senze isinqumo esicatshangelwayo lapho sithenga. Kube khona ushintsho lwe-180 degree ngokuhamba kwesikhathi. Ngenkathi amaketango amakhulu endwangu ethatha izinyathelo ezincane ukusiza ngokusimama nokwenza amaqoqo ama-capsule, usemkhulu umsebenzi okufanele wenziwe.
Khumbula, imboni yezemfashini iyimboni yesibili engcolisa kakhulu ngemva kukawoyela, futhi iplanethi yethu ayikwazi ukuvumela izinkampani ezinkulu ukuba zikhiqize izingubo ngocezu ngaphandle kokucabangela umthelela wesikhathi eside kithi. Ngenxa yalesi sizathu, abanye abaklami, izitolo kanye nama-stylists banqume ukuthi baqale ukusebenza, ngokusimama nokunakekela imvelo njengendinganiso.
Nakuba izinhlobo eziningi ezisimeme zingakaziwa kahle, amakhasimende abo akhula kancane futhi aqala ukubona ukubaluleka kokuthi izingubo zethu zenziwe ngaphansi kwezimo ezingcono kakhulu zabasebenzi kanye neplanethi. Kangangoba amanye amafemu akhethe ukuzenzela amaqoqo azo asimeme.
Ngaphezu kokuthenga izingubo ezisimeme kwamanye amasayithi esiwancoma ngezansi, ungagcina imvelo ngokuya kuzo izitolo zakudala, izindawo zokusebenzela zokudala noma ukushintshana noma ukuqasha izingubo kwezinye izinhlelo zokusebenza eseziphumelele. Akungabazeki ukuthi ukuvikela iplanethi namuhla nokugcina usesikhathini akuzona izinto ezingahambelani.
Ezweni lethu, kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo enamanani okuziphatha nezinzile ezikhiqiza izingubo ezingelula nje ukuzisebenzisa, kodwa futhi ezintsha. Sikubonisa eminye imibono ongabuyekeza ngayo ikhabethe lakho ngenkathi unikeza iplanethi ikhefu.
Imikhiqizo engcono kakhulu esimeme
Okubaluleke kakhulu kule nkampani ukucabanga ngalesi sikhathi ukuze ishiyele izizukulwane ezizayo ifa elihle. I-Lifegist ithenga izindwangu eziqinisekisiwe ze-Global Organic Textile Standard (GOTS) eYurophu, futhi I-Madrid yilapho zonke izingubo zikhiqizwa khona ukuze kugwenywe i-carbon footprint yokuthutha.
I-Ecoalf izitholele yona njengelinye lamagama aziwa kakhulu ngemfashini esimeme ezweni lakithi, nangaphandle kwemingcele yethu. Umdali wayo, u-Javier Goyeneche, wayefuna ukukhombisa ngezingubo zakhe ukuthi kwakungenzeka ukuqhubeka nokuba nekhwalithi enhle nokunambitheka okuhle ngaphandle kokusebenzisa kabi imithombo yemvelo.
Lo mkhiqizo uzibophezele ngo-100% emvelweni. Kakhulu kangangokuthi zonke izicathulo zabo zenzelwe e-Barcelona futhi ziwumsebenzi wezingcweti ezisebenza efektri eduze kwase-Alicante, okubavumela ukuba bahlole njalo izimo zokusebenza kanye nekhwalithi yokukhiqiza.
Ngalesi sikhathi sokugcina, bethule isicathulo esenziwe ngamakhoba e-nopal noma ommbila, okuyizinto ezisimeme futhi ze-vegan. Akungabazeki ukuthi umbono omusha nomusha uzoba yimpumelelo.
Ifemu yezimpahla zokubhukuda yaseCatalan ilindele impumelelo njengoba kusondela ihlobo futhi nohambo oluya ogwini lufika. Umklami walezi zingcezu nguPeque de Fortuny, okuyinto ngothando olukhulu olukwazile ukudala iqoqo lokugezela eliqhubekayo, elikhiqizwa kuphela ku-studio yayo e-Barcelona.
I-Playa & Co.
Le phrojekthi yemfashini yobumbano edalwe ngu-Cristina Piña ibeka ukugxila kwemvelo. Ngezingubo ezenziwe ngezinto eziphilayo ezigaywe kabusha ezihlobene nolwandle, inqubo eyenza imbuyiselo bese inikela ngengxenye yenzuzo kuphrojekthi yomphakathi, i-Playa iguqule isikibha esinemigqa saba yizingubo zenkanyezi, unyaka nonyaka igqugquzelwa icons ezahlukene
Inkampani ishiye ngemuva imfashini esheshayo, ekhombisa ukuthi izingubo zingasimama futhi zibe zinhle, kuyilapho kugcinwa izintengo ezithengekayo futhi uhambisana nezitayela ezivela ezinkampanini ezinkulu. Ngaphezu kwalokho, u-María Malo uzama, ngomkhankaso wakhe ngamunye, ukuthi amakhasimende akhe athuthukise isimo sengqondo esiqaphela kakhulu yonke into ewazungezile.
Inkampani isifinyelele isikhundla esiqinile embonini yezemfashini. Abaqambi bayo abavela e-Alicante banqume ukuqhubeka nesinyathelo esisodwa ezweni elizinzile futhi bahlola izindlela ezintsha zokuklama nokusebenzisa izinto ezingavuthiwe ezintsha ukuze benze amaqoqo abo, nakuba behlonipha ngokuphelele imvelo.
Uma ungomunye walabo abazisa okuyingqayizivele kwengubo ngayinye ku-wardrobe yakho, lokhu ngokungangabazeki kuzoba uphawu lwakho oluthandayo. Le phrojekthi iqukethe kuphela izikibha ze-edishini elinganiselwe ezidwetshwe abaculi abangu-12 abavela emhlabeni wonke.
Zonke izingcezu ze-My Skirts ziyizinhlelo ezinomkhawulo eziphefumulelwe izingxenye ezahlukene zeplanethi yethu ukuhlonipha imithombo yayo yemvelo kanye namalungelo abantu abadali bayo.
Inkampani yesiCatalan izibophezele ekuphelelweni kwesikhathi kwezingcezu zayo, yakha izingubo zekhwalithi ezingasoze zaphuma esitayela. Ngezinto ezisimeme ezifana noboya bemvelo nokotini, izindwangu ezigaywe kabusha kanye nokukhiqizwa kwasendaweni, izingubo ze-CUS seziphenduke "okufanele ube nazo" ekhabetheni lakho.
Uhlobo lwe-Ecoology lusebenzisa izindwangu zemvelo, ezemvelo nezigaywe kabusha ngokunaka okukhulu emininingwaneni emiklamo yabo, ukuqinisekisa ukuthi bazohlala ku-wardrobe yakho iminyaka eminingi ezayo.
Njengoba ubona, kubalulekile ukugqoka izingubo ezinciphisa umthelela wemvelo, ngoba ingenye yezimboni ezingcolisa kakhulu iplanethi futhi zidliwa kakhulu nsuku zonke. Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nemikhiqizo eyinhloko esimeme ekhona nokuthi yiziphi imigqa yazo yomsebenzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Imvelo » brand esimeme
Kubalulekile ukuthi izinkampani ziqaphele kakhulu isidingo sokunakekela imvelo. Kimina, yizinkampani ezinkulu ezingcolisa kakhulu futhi ezenza umonakalo omkhulu emhlabeni wethu.
Sonke sidinga ukuqaphela.
Impendulo ivela ku- Sumi